Madaafiic Khasaare geysatay oo Amisom ay ku garaacday Deegaano hoostagga Janaale – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Amisom ayaa Madaafiic Khasaare geysatay waxa ay ku garaaceen tuulo hoostagta Deegaanka Janaale oo ka tirsan Gobolka Shabellaha hoose.
Deegaanka Faranga oo ka mid ah Deeganada hoostagga Deegaanka Janaale ayeey Madaafiicda ku garaaceen ciidamada Amisom, waxaana ka dhashay Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay saddex caruur ah ayaa ku geeriyootay Madaafiicdaasi, halka ay ku dhaawacmeen labo habeen ah, kadib markii goobihii ay deganaayeen Madaafiicdaan ay ku dhaceen.
Guddoomiyaha Deegaanka Shalaanbood Nuur Cismaan Raagge oo la hadlay Warbaahinta ayaa wuxuu sheegay dadka madaafiicda ku dhintay inay ahaayeen rayid Xaafadahooda isaga sugnaa.
Waxa uu sheegay ciidamada Amisom inay u sheegeen Madaafiicda inay ku laayeen dad rayid ah, balse arintaasi ay iska indha tireen.
Waxa uu sheegay in Amisom Madaafiicdaan ay ka soo tuureen Xero ay ku leeyihiin Tuulada Buufow oo hoostagta Deegaanka Shalanbood ee Gobolka Shabellaha hoose.
Madaafiicdaan ciidamada Amisom ay ku garaaceen Deegaano hoostagga Deegaanka Shalaanbod ayaa ku soo aadaya, xilli shalay galab weerar adag Amisom ay kala kulmeen dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab.